यो ठाउँमा थरिथरिका मान्छे आएका हुन्छन् । म यो ठाउँमा बसेको करिब १० वर्ष भइसक्यो । नयाँ नौलो मान्छेहरु देख्नै नहुने ! जाने हो ? भनेर सोधिहाल्छन् । एक्कासि त सोध्दैनन् तर एकछिन हिँडडुल गर्दा शंका गरिहाल्छन् र जाने हो भनेर सोधिहाल्ने गरेको देखेको छु । जब साँझ–साँझ पर्छ, यहाँ देह व्यापार गर्नेहरुको जमघट सुरु
हास्यकलाकार मनोज गजुरेल र मीना ढकालबीच भएको डिभोर्स व्यक्तिगत विषय भए पनि जनचासो कम छैन । यो घटना सार्वजनिक भएसँगै चित्त दुखाउने आम नागरिक धेरै भेटिए । मनोज–मीना ट्रयाजेडीबारेको जनमत यस्तो छ : सुमन तामाङ, चालक मैले त बल्ल थाहा पाएँ । उनीहरुको इच्छाको कुरा हो । यो नितान्त व्यक्तिगत विषय पनि हो । अरूको
दुबई हुँदै हवाईमार्गबाट नेपाल आएर त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत विमान कम्पनीका सहयोगीमार्फत् बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन र त्यसको जालो दुई महिनायता नेपालमा चर्चाको शिखरमा छ । नेपालमा सुन तस्करी नौलो घटना हुन छाडेको धेरै भइसकेको छ । प्रहरी अधिकारी र भन्सारका कर्मचारी जोडिनु पनि नौलो घटना थिएन । विमानस्थलमा आवतजावत गर्ने हवाई कम्पनीका कामदार, तस्कर
फिल्मका लागि छापेको नक्कली नोटका कारण फिल्म निर्माता माधव वाग्ले प्रहरी हिरासतमा छन् । नेपाली फिल्ममा यस अगाडि पनि यस्तै गरिने भए पनि फिल्मका लागि छापिएको नोट बाहिरिदा वाग्ले जाली नोट छापेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा पुगे । अन्य देशमा यस्तो घटनामा प्रहरीको भुमिका के हुन्छ ? हलिउडको घटना प्रस्तुत गरेका छौं । सन् २००० को
काठमाडौं – नेपालमै पहिलो पटक ‘मोबाइल एस्यूरेन्स’ सेवा सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंको न्यूरोडस्थित ताम्राकार कम्प्लेक्सको पाँचौं तल्लामा रहेको ईजी मोबाइल केयर प्रालिमा यो सेवा सार्वजनिक भएको हो। ग्राहकहरूको माझमा विश्वासिलो र भरपर्दो नाम कमाएको यस प्रालीले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर ईजी सर्भिस अन्र्तगत मोबाइल स्क्रीनको एस्यूरेन्स सेवा सार्वजनिक गरेको छ। ईजी सर्भिसले एस्युरेन्स
तस्बिर: शोभा ज्ञवाली वैशाखको मध्यमा म पारिवारिक भ्रमणका क्रममा संखुवासभास्थित पाथिभरा मन्दिर पुगेकी थिएँ । हुन त काठमाडौँबाट सुरु भएको सडकयात्रा एकैचोटि संखुवासभा पुग्नु असंगत देखिएला तर यस असंगतको कारण छ, गुराँस फुल्ने याममा म पुगेकी थिएँ र त्यो यति मनोरम थियो कि गुराँसकै कथाबाट यात्रा वर्णन अघि बढाउन मन लाग्यो । गुराँसे डाँडा
राजधानीको त्रिचन्द्र कलेजमा कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघको दुई समहूबीच खुकुरी हानाहान भएको छ । दुई समूहबीचका विद्यार्थीको ग्याङ फाइटमा तीनजना घाइते भएका छन् । यो घटनाका क्रममा खुकुरी हानिँदा नेविसंघ कार्यकर्ता कौशल दाहाल, अजय गजुरेल र गोरख रदुले घाइते भएका महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गले जानकारी दिएको छ। खुकुरी हानाहानपछि पुगेको प्रहरीले कलेजबाट तीनजनालाई
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने टुंगो लागे पनि उसले मन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन। अहिले सरकारमा सहभागिताका लागि फोरम नेतृत्वबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। सरकारमा फोरमका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्ने विषय टुंगो लागे पनि बाँकी एउटा मन्त्रालयमा को सहभागी हुने भन्नेमा निष्कर्ष निस्किएको छैन। पार्टी संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले पनि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच दिन लामो भ्रमणका लागि असार ५ गते उत्तरी छिमेकी चीन जाने भएका छन् । असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म हुने भ्रमणको तालिका मिलाएर चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेल बेइजिङ प्रस्थान गरिसकेका छन् । सरकारले ओलीको चीन भ्रमण कार्यक्रमलार्इ गोप्य राखेको छ । ओलीको चीन भ्रमणको कार्यक्रमको टुंगो दुवै देशले